Làlana mankany amin'ny fanabeazana fandriam-pahalemana: Fandriampahalemana sy herisetra amin'ny fomba fijerin'ny ankizy - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Septambra 18, 2021 Research 0
Ny mpianatra any amin'ny ambaratonga voalohany dia mahatsapa ny fiheverana ny fandriam-pahalemana amin'ny lafiny iray manokana sy ny tena ary mahatsikaritra mivantana ny fiheverana ny herisetra ho toy ny herisetra ara-tsosialy sy ara-kolontsaina.
(Navoaka avy amin'ny: Gazety iraisam-pirenena momba ny fampianarana amin'ny fanabeazana. 2018)
Yilmaz, F. (2018). Làlana mankany amin'ny fanabeazana fandriam-pahalemana: Fandriampahalemana sy herisetra raha ny fijerin'ny ankizy. Fianarana iraisam-pirenena momba ny fampianarana, 11 (8), pp. 141-152. DOI:10.5539 / ies.v11n8p141
Zava-dehibe ny fandraisana ny fiheverana ny fandriam-pahalemana ho kolontsaina rehefa hajaina eo amin'ny sehatra sosialy ny zon'olombelona, ​​ny demokrasia, ny fiaraha-miaina sy ny fahasamihafana. Indrindra amin'ny fahazazany, ny fampidirana an'ity hevitra ity amin'ny olona tsirairay dia afaka manakana ny kolontsaina mahery setra tsy hahita fanampiana ara-tsosialy na isam-batan'olona. Amin'io lafiny io dia antenaina ny olona hanaparitaka ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fanabeazana ary hanilika ny herisetra. Tao anatin'ity fikarohana ity dia noheverina ny naneho ny fahitan'ny mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany ny fiheverana ny fandriampahalemana sy ny herisetra amin'ny fiainany andavanandro. Notsapaina ny hamaritana ny fomba famaritan'ny mpianatra ireo hevitra ireo amin'ny sary an-tsary, ny fomba fiteny ary ny fitenenana am-bava. Ny fikarohana dia natao ho toy ny fikarohana kalitao amin'ny fomba fikarohana kalitao. Mpianatra ambaratonga voalohany 68 no nandray anjara tamin'ny fikarohana. Namantatra lohahevitra efatra lehibe momba ny fandriam-pahalemana ny mpianatra: “fandriampahalemana iraisan'ny rehetra / iraisan'ny fiaraha-monina, fandriampahalemana eo amin'ny vondrona / fiarahamonina, fandriampahalemana eo amin'ny samy olona ary fandriampahalemana isam-batan'olona.” Lohahevitra dimy amby roapolo mifandraika amin'ireo lohahevitra 4 lehibe no noforonina. Mikasika ny herisetra, lohahevitra efatra lehibe no mipoitra: "herisetra ara-tsosialy sy kolontsaina, herisetra mivantana, herisetra ao amin'ny vondrona ary herisetra eo amin'ny tontolo iainana". Lohahevitra enina ambin'ny folo no navoaka, miankina amin'ireo lohahevitra efatra lehibe ireo. Fantatra fa amin'ny lafiny ankapobeny dia takatr'izy ireo amin'ny ankapobeny ny hevitry ny fandriam-pahalemana ary tsapan'izy ireo mivantana fa ny herisetra dia ny herisetra eo amin'ny fiaraha-monina sy ny kolontsaina.
kitiho eto raha hiditra amin'ilay lahatsoratra
# fampianarana fanabeazana
Boky vaovao: manabe ho amin'ny fandriampahalemana
Enga anie 19, 2016 Fampitaham-baovao 1
"Fanabeazana ho an'ny fandriam-pahalemana," natontan'i Lokanath Mishra, dia nametraka fototra ho an'ireo mpianatra, mpampianatra ary mpanabe fandriampahalemana hizaha ireo singa ilaina hamoronana fiarahamonina milamina. Natao indrindra ho an'ny mpikaroka, mpanabe fandriampahalemana ary mpianatra, ity boky ity dia fikasana hamantatra sy handinika ireo lohahevitra tokony horesahina raha te hampiorina tanteraka ny fanabeazana momba ny fandriam-pahalemana isika.
Fampianarana ho an'ny fandriam-pahalemana any Afghanistan: fandalinana fampitahana momba ny boky fampianarana an-tsekoly ady sy ady
Febroary 3, 2018 Research 0
Ireo boky fianarana any Afghanistan dia navoaka hanohanana ireo fitondrana nifandimby na governemanta nandritra ny taona 1979 ka hatramin'ny 2002. Nanomboka tamin'ny 2003 ka hatramin'ny 2014, ny governemanta Repoblika Islamika Afghanistan, miaraka amin'ny fanohanan'ny masoivoho mpamatsy vola iraisam-pirenena, dia niasa mafy nanova ny làlan'ny fanabeazana ho amin'ny fandriam-pahalemana sy fanabeazana kalitao. Ity fandalinana fikarohana nataon'i Hafiza Yazdani ity dia manombatombana ireo fomba samihafa amin'ny fanabeazana ireo amin'ny alàlan'ny fijerena ireo boky an-tsekoly avy amin'ny fomba fijery ny fandriam-pahalemana. [tohizo ny famakiana…]
Sampan-draharaha miovaova amin'ny fanabeazana ho an'ny fandriam-pahalemana, zon'olombelona, ​​ary ny rariny ara-tsosialy
March 10, 2019 Research 0
Ity lahatsoratra nosoratan'i Dr. Monisha Bajaj ity dia mandinika ny foto-kevitry ny maso ivoho manova, izay eo afovoan'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana. [tohizo ny famakiana…]